INGCA EYENZIWEYO (ISIKHOKELO SEMIBONO YOYILO) - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba Ingca eyenziweyo (Isikhokelo seMibono yoyilo)
Ingca eyenziweyo (Isikhokelo seMibono yoyilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela sengca kubandakanya izibonelelo, iindleko, iingcebiso zokufaka, imifanekiso kunye nemibono yoyilo.
Ingca eyenziweyo ihambe indlela ende okoko yaqala ukubonakala kwimidlalo yebhola ekhatywayo yeTV kwiminyaka yama-60s. Le mveliso, ngoku inyukayo ekuthandeni iyenze yaba yigadi yokuhlala kunye nengca kwaye ngamanye amaxesha ngaphakathi endlwini! Njengoko sibona ngakumbi nangakumbi kwesi sixhobo sinezinto zethu zangaphandle (nakwangaphakathi), kubonakala ngathi lixesha elifanelekileyo lokufumana okungakumbi ngalo.
Yintoni ingca eyenziweyo? Njengoko igama lisitsho, ingca eyenziweyo yenye yezinto ezinokwenziwa ngengca yendalo. Inqanaba ngalinye lengca liphakathi kwe-1 kunye ne-1/4/4 ″ okanye i-25-45mm kwaye yenziwa ngezinto ze-polyethylene-enye yeendlela zeplastiki eziqhelekileyo.
Ingaba isebenza kanjani? Ingca nganye ifuna inkxaso ukuze ihlale ime nkqo, kwaye ihlale emhlabeni. Kulapho ke kungena umaleko wesanti okanye wengca, apho zombini iinketho zivelisa iziphumo ezikumgangatho ophezulu.
I-turf eyenziweyo kunye ne-Thatch ixhaswa yi-fiber frizzy edityaniswe kulwakhiwo lwayo, olungagcini nje ukomeleza iincakuba ezizodwa kodwa ezenza ingca ibonakale igcwele. Olu luhlu lwenziwe nge-polypropylene, i-polyethylene okanye i-nylon kwaye lukhuthaza ukubuyiswa komtya.
Ingca eyenziweyo engenafulethi inokuxhaswa malunga nesanti enzulu eyi-0.8 intshi. Oku kuyayithoba ingca, ukuyigcina ikwindawo kwaye igcwalisa izithuba phakathi kweebhleyidi ezigcina zime nkqo. Ingca exhaswa yisanti iyakhuthazwa njengotyalo-mali lwexesha elide, kwaye ihlala yomelele ngakumbi kunengca.
Izibonelelo zeGrass eyenziweyo
Ingca eyenziweyo yeZinja neekati
Artificial Ingca Carpet & Tiles
Indalo Turf vs Ingca eyenziweyo
Iindleko zeGrass ezingezizo
Iindleko zokufakelwa kwengca engeyiyo
Ukufakelwa kwengca eyenziweyo
Uyibeka njani ingca eyenziweyo
Uyicoca njani iGrass eyenziweyo
Uyilo lweGrass eyenziweyo
Ingca eyenziweyo engemva kwendlu
Iindonga zengca ezingezizo ezokwenziwa
Ingca eyenziweyo ibeka ukuluhlaza
Ingca eyenziweyo yePlayground
Ingca eyenziweyo ejikeleze iphuli
Ingca eyenziweyo kwiDisk
Ingca eyenziweyo ye Balcony
Amanyathelo ekhonkrithi anesiGxina somlilo
Indawo yokuhlala yangaphandle
Kuphi ukuthenga ingca eyenziweyo
Ke ziziphi izibonelelo zengca eyenziweyo? Kufuneka kubekho into egcina ukutsala abantu babuyele kule nkangeleko, kwaye emva kokwenza kancinci ukumba kungekudala ufumanisa ukuba zininzi izibonelelo ezinomtsalane zokufaka ingca eyenziweyo.
Kukugcinwa okuphantsi -Ingca eyenziweyo ayifuni kunkcenkceshelwa, ukuchumisa okanye ukugunda kwaye ke ngoko ifuna ukugcinwa okuncinci ukuyigcina ikhangeleka intle. Ukufezekisa ukuba ulwa negadi, okanye ayisiyonto yakho yokwenyani.
Ijongeka intle unyaka wonke -Ngokungafaniyo nengca yendalo enokuthi ibune ngexesha lasehlotyeni, i-turf engeyiyo eyokwakha inezinto zokuzinzisa ze-UV ezithintela umbala wayo oluhlaza ocacileyo ukuba ungapheli. Umphezulu nawo uyamelana nomoya, isichotho, ikhephu- uwubiza ngegama. Nokuba ziphi na iimeko zemozulu, ingca eyenziweyo iya kuhlala ikhangelekile kwaye intle kuwo onke amaxesha onyaka.
Indawo intle -Ngaphandle kokukhula kwengca yakho, awusayi kuphinda ufune umshini wakho wokucheba ingca -umatshini wokurhola igesi omele i-5% yongcoliseko lomoya e-US. Ngaphandle kwemiphunga ebangela ukukhutshwa kwe-carcinogenic ngelixa ucheba, uya kuba unceda ukukhusela iplanethi ngelixa ukhusela imiphunga yakho.
Ulondolozo lwamanzi - Awusayi kuphinda usebenzise amanzi ukucoca ingca yakho. Ngokwe-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo, isinye kwisithathu samanzi oluntu asetyenziselwa ukunkcenkceshela ingca… malunga neebhiliyoni ezili-9 zeelitha zamanzi ezisetyenziswa yingca e-US yonke imihla. Ukusetyenziswa kwamanzi okuncinci akuyi kunceda kuphela okusingqongileyo, kodwa namandla akho amatyala.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ube ne-pooch okanye i-feline uyazi ukuba kanjani ngelishwa ingca yakho inokuziva emva kokuba ibethwe kwaye ityunyuziwe ziindawo ezinamaqhakuva! Ngokungafaniyo nengca yendalo, ingca eyenziweyo ayinakho ukwembiwa ize idilizwe. Baninzi abavelisi abavelisa ingca eyenziweyo ekumgangatho ophezulu, ngakumbi amakhaya anezilwanyana zasekhaya. Kubalulekile ukuba wazi iindlela ezahlukeneyo ezikhoyo ukuze uqonde ukuba ungayigcina njani ingca yakho kunye nezilwanyana zasekhaya edolophini.
Enye yezona zinto zixhalabisayo malunga nengca eyenziweyo, kunye nokuba nenja (okanye ikati!) Kukwakha umchamo ngaphezulu. Kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukuqinisekisa ukuba oku akuyi kuba yingxaki yexesha elide:
Qinisekisa ukuba ingca ifakiwe ngokuchanekileyo- isiseko esisezantsi kufuneka singene ngaphakathi ukuvumela ukuhamba kwamanzi (okanye umchamo!) Ukuya kwiindawo ezingaphantsi zokucoca. Xa ufaka ingca, thetha nomlungisi ukuqinisekisa ukuba bayazazi iinkxalabo zakho zomchamo.
Gcina ingca yakho-oku akufuneki ukuba kube kukuchitha ixesha elininzi, nangona kuya kuxhomekeka ekubeni zingaphi izilwanyana zasekhaya onazo ezisebenzisa ingca ukuyichamela. Ithumbu phantsi kwengca kanye ngenyanga kufuneka lisuse umchamo, kwaye lincede ekunciphiseni amavumba e-ammonia. Imveliso yokucoceka ngobuchule iyacetyiswa ecaleni kwale nto, ngakumbi ngexesha lasehlotyeni xa iphunga linokuba namandla.
Cinga ngeenwele zasekhaya- ukuba isilwanyana sakho sine-malts, ke naziphi na iinwele ezingavuthelwanga zihlale kumphezulu wengca kwaye zithintele ukukhutshwa simahla kwamanzi kunye / okanye umchamo. Qiniseka ukuba uhambisa ingca okanye usebenzisa i-blower blower ukulahla naziphi na iinwele ezilahlekileyo.
Ukuba sele ulwa nevumba lomchamo wezilwanyana erenkini yakho, kukho iingcebiso ezininzi kwi-intanethi zezinto onokuzenza ukuze unciphise ivumba. Nangona kunjalo, lumka njengoko ezinye zeemveliso ezisetyenzisiweyo zinokuphelisa ukwenza i-lawn yakho ivumba learhente yokucoca. Zoflora isibulala-zintsholongwane, iviniga emhlophe yeviniga emhlophe kunye neJeyes Fluid yangaphandle isibulali zintsholongwane zizimvo nje ezimbalwa. I-Green eluhlaza ikwenzile imveliso ekhuthazwa kakhulu.
Jonga le khaphethi yengca ingeyiyo IAmazon
Nokuba ifakwe ngaphakathi okanye ngaphandle, cinga ingca yakho njengekhaphethi. Unokuthatha isigqibo sokuthenga umqulu wengca, okanye icandelo elincinci ukuphucula indawo yekhaya lakho. Iindawo ezincinci zekhaphethi zilungele ukusetyenziswa kwimihlaba kunye neebhalkhoni ukuba ufuna ukongeza imvakalelo yendalo. Iithayile zengca eyenziweyo zinokuba zezilungele le njongo…
Ukuba usebenza ngendawo encinci, iithayile zengca eyenziweyo zinika isisombululo esisebenzayo. Ngokuqinisekileyo kulula ukuzifaka kunemiqulu emikhulu ye-turf, kwaye zilungile kwiipatios. Ziyakwazi ukushukunyiswa zijikeleze xa kufuneka njalo. Olu khetho alufanelekanga kwiindawo ezinkulu, ngenxa yeendawo ezininzi ezibangelwa ziithayile ezidibeneyo. Imiphetho ye-turf nayo inokuba semngciphekweni wokugoba, ke ukufakwa ngokuchanekileyo kunye nokugcinwa kubalulekile.
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga kweli nqanaba, kuya kufuneka ngoku ube unoluvo olungcono ngezibonelelo zengca eyenziweyo - kodwa ngaphambi kokuba 'i-turf Turf' iqwalasele izibonelelo zengca yendalo inayo.
Ingca yendalo ilunge ngakumbi kwindalo esingqongileyo - Ewe, ingca yakho eyenziweyo iyanceda iplanethi kodwa akukho nto inceda iplanethi ngcono kunendalo uqobo! Ukuba uthatha i-lawn esezingeni eliphakathi nendawo esempilweni, oku kungabamba ngaphezulu kweepawundi ezingama-300 zekhabhoni ngonyaka.
Ungasathethi ke ngezilwanyana zasendle. Izityalo kunye nezinambuzane ziyachuma ngaphakathi kwengca yakho, kwaye ukukhetha eyona nto iyakunceda ukuxhasa indalo.
Indalo yendalo inokuyiphucula impilo yakho yengqondo kunye nokuba sempilweni -Uphando luninzi kunxibelelwano phakathi kwendalo kunye nempilo yengqondo, kwaye iindawo eziluhlaza zidlala indima koku. Ubungqina buyakhula kwikhonkco phakathi kokulima kunye nengca yendalo ekuphuculeni impilo yabantu.
Ukunqongophala kwee-biocides zesilivere -Iintlobo zengca eyenziweyo eveliswe ngokukodwa ezinjeni, zine-ion zesilivere ezinceda ukususa iibhaktheriya. Umcimbi ngezi ion ziyityhefu kukuba xa sele beye kungena kwiinkqubo zamanzi badibana nezilwanyana zasendle- zinefuthe elibi. Ukutya kwengqondo…
Zithini iindleko zengca eyenziweyo? Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali oluxineneyo, kusekho ukhetho lokuba ufake ingca eyenziweyo njengeprojekthi ye-DIY. Nangona kunjalo kuya kufuneka uyazi ukuba umgangatho wengca yohlahlo-lwabiwo mali iyakuchaphazeleka, kunye nembonakalo. Iindleko ziqala ukusuka kwi- $ 12.50 ngeenyawo zenyawo nganye.
Ngotshani obuphakathi obuphakathi kweenyawo ezili-1200 uya kujonga ukuchitha kwingingqi eyi- $ 15,000. Oko kunokubonakala ngathi kuninzi xa kuthelekiswa nengca yendalo, nangona kunjalo i-turf yokufakelwa inokuhlala iminyaka eli-15 ukuya kwengama-25. Isod yendalo ibaleka ngokujikeleza i-1.35 yeenyawo zenyawo kodwa inexabiso lokugcina lonyaka le- $ 1000.
Ukuba uzimisele ukutshiza imali yoyilo loyilo oluhle kakhulu lwesiko, uya kuba ujonge ukukhupha uhlahlo-lwabiwo mali ukuya kuthi ga kwi-20 yeedola.
Kufanelekile ukufumana iisampulu zengca onomdla kuyo ngaphambi kokuba uthenge. Njengokuba xa u-odola ikhaphethi, uya kufuna ukukhangela ubunjani kunye nokuziva kwengca yakho ngaphambi kokuba uzibophezele.
Kuza kubiza malini ukufaka? Ngokuqinisekileyo unokukhetha ukufaka ingca yakho yokufakelwa ngokwakho, kodwa ayinguye wonke umntu onokuzithemba okanye ubuchule bokwenza njalo. Ukuqesha ingcali uya kujonga inkcitho phakathi kwe- $ 7 ukuya kwi- $ 8 ngonyawo wesikwere wofakelo. Iindleko ziya kwahluka nangona kuxhomekeke kubume bengca yakho kunye nobukhulu bayo. Iindleko zabasebenzi zokufaka ingca enkulu zinokubangela iindleko eziphantsi ezi- $ 6 ngenyawo lesikwere, ngelixa ingca ebuncinci besayizi ihlala ibiza kakhulu.
Kuthekani ukuba ndifuna ukuyifaka ngokwam? Ukuba unomdla wokuya kufaka ingca yakho ngokwakho, ayitsho into yokuba kuya kufuneka wenze uphando lwakho. Ukukunika umbono olirhabaxa wento onokuyilindela, nanga amanyathelo abalulekileyo oza kuyithatha.
Cwangcisa - eyokuqala kwaye ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzenzile kukulinganisa iyadi yakho yangasemva ukumisela ukuba ingakanani ingca eyenziweyo, izinto zokudibanisa kunye neembrane ezifunekayo. Eli nqanaba liya kukunceda ukunciphisa nayiphi na inkcitho kwaye ugcine imali.
Susa ingca yakho - sika izikwere engceni elinganisa malunga nee-intshi ezimbini ubunzulu kunye nee-intshi ezilishumi ububanzi. Oku kuya kukunceda ususe ingca kumanyathelo alawulwayo kwaye uqiniseke ukuba ungagxila ekutsaleni naziphi na iingcambu phantsi kwesikwere ngasinye. Ukuba unkcenkceshela ingca ngaphambi kwale nkqubo, oku kuya kunceda ekususeni ingca.
Ukubeka isiseko sakho -Ukuba ujonge ukufaka ingca yakho eyenziweyo emhlabeni, umaleko wegranite okanye ilitye lekalika liya kunceda ekuqinisekiseni ukuba isiseko sakho sikhupha simahla. Kwindlela yokubeka; umaleko wokudityaniswa ngokuthe ngqo phantsi kwengca, igranite okanye uthuli lekalika kufuneka lufakelwe. Ngaphezulu koku, inwebu ye-geotextile inokufakwa ukuba iyafuneka, eya kuthi incede ukuthintela ukukhula kokhula phantsi kwengca.
Beka ingca yakho - Into ekufuneka uyazi apha kukuba ukuba ubeka iziqwenga ezibini ezahlukileyo kumqolo okanye iithayile, qinisekisa ukuba ingqumba yengca ikwicala elinye.
Nciphisa kwaye ujoyine - Cima nakuphi na ukugqithisa ukuqinisekisa ukuba ingca yakho ingena ngokucocekileyo kwisithuba. Joyina nayiphi na imiqobo yekhaphethi kunye.
Yongeza isanti - Bhrashi phezu kwengca ebekiweyo kunye nesanti yokugcwalisa. Ukuxubha isanti yesanti kunceda ekuqinisekiseni ukuba ingca nganye ihlala ime nkqo kwaye iya kunceda ukugcina ingca ime kakuhle.
Ngelixa ngokuqinisekileyo ifuna ukugcinwa kancinci kunengca yendalo, ingca yakho eyenziweyo iya kusadinga ukuhoywa ukuqinisekisa ubungakanani bayo obude. Kukho iintlobo ezininzi zezinto zokucoca kwimarike ezifanelekileyo ukucoca ingca yakho eyenziweyo. Ngaphandle kwale, izinto ezimbalwa onokuzenza zibandakanya:
Nika ingca yakho uhlambe ukuze ususe uthuli kunye nayo nayiphi na into oyakhayo
Sebenzisa iharika / igqabi legqabi ukususa nantoni na elele ngaphezulu
Bhrasha ingca usebenzisa ibrashi eyomeleleyo ukususa uthuli kunye nokungcola
Umtshayelo ngokuchasene nengqolowa yendalo yengca ukukhuthaza ii-blades ukuba zihlale zime nkqo
Ukuba unesilo-qabane esisebenzisa ingca ukuzikhulula, kuya kufuneka ususe indalo ngokukhawuleza kwaye uyitshize ukuze uhlambe umchamo. I-Lawn neutralizers njengoko kuchaziwe ngaphambili kweli nqaku inokunceda ekulweni naliphi na ivumba eliqhubekayo.
Apha sabelana ngolungelelwaniso loyilo lwengca eyenziweyo yokuphefumlela.
Olu luyilo lubonisa isiko ibhentshi elingaphandle umgodi womlilo wepati yekhonkrithi kunye nengca eyenziweyo.
Uyilo olungentla kwengca eyenziweyo lusetyenziselwa umda Ibala elingasemva kunye nedama lokuqubha.
Ingca engemva kwengca iluncedo kakhulu kwiindawo ezinengxaki yembalela kunye nokunceda ukunciphisa iindleko zokugcina ixesha lihamba. Kuqikelelwa ukuba ukufakelwa kwengca eyenziweyo kuya kuzihlawulela ngokwakho kwiminyaka emi-3 ukuya kwengama-4 ngemali egcinwe ekubeni nexabiso eliphantsi lokulungisa umhlaba kunye nolondolozo.
Ingcinga yokuba nodonga lwengca eyenziweyo inokubonakala ingaqhelekanga, kodwa zilungile ukongeza ingxelo ngaphakathi. Eyona ixhaphakileyo ibonwa kwiihotele nakwizakhiwo zorhwebo, udonga lwengca olungelolwendlela yindlela efanelekileyo yokuzisa imvakalelo yendalo- ngaphandle kolondolozo lwendalo.
Ngelixa ingca eyenziweyo ixhaphakileyo isetyenziselwa ukubuyisela ingca yendalo esele ikhona, ukusetyenziswa kwayo akupheleli koku. Ingca eyenziweyo inako ukufakwa ngaphezulu kweepavile zekhonkrithi, kunye nepati. Ke, ukuba unenkxalabo yokuba indawo yangasemva yakho esele ikhona kunye nokuphelelwa kwayo lixesha kungaphaya koncedo - ukufaka ingca eyenziweyo ngaphezulu kwale nto sele isisombululo esinokwenzeka.
Ewe ufunda ngokuchanekileyo! Ezi zinokufakwa kubomi bokwenyani ngaphandle kwibala legalufa, kwaye iinguqulelo ezincinci zinokufakwa nakwiyadi yakho yangasemva. Umyalelo wakho owenziwe ngokwesiko unokubandakanya ukungafani kunye nokuphakama njengokuba uza kubona kwinto yokwenyani.
Iindleko ze ngasemva kubeka luhlaza I-turf ihlala ibaleka ukusuka kwi-18 ukuya kwi-40 yeedola ngeenyawo zenyawo. Ezi ndleko zibandakanya izinto kunye nofakelo. Imifuno emincinci iya kuthi ibize imali encinci kunyawo lwesikwere kuba kuya kufuneka ukuba ilifanele ixesha lekhontrakthi lokwenza lo msebenzi.
Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha, uya kudinga ubuncinci i-500 iinyawo zesikwere sendawo yangasemva efanelekileyo yokubeka uluhlaza kunye noyilo lweyadi yangasemva engena kwi-1500 yeenyawo zenyawo.
Indawo yasemva kwegrabile inikezela ngento encinci yokubeka luhlaza ngendlela yetshe.
Isiko eligobileyo elibeka uluhlaza ngekhonkrithi kunye nomda omkhulu wegrabile. Bona Okuninzi iintlobo zegrabile ukusebenzisa apha.
Sebenzisa ingca eyenziweyo njengomphezulu webala lokudlala inesibonelelo esongeziweyo sokugcina abantwana bangadaka xa bedlala. Ukongeza, ngokudibanisa indawo yangaphantsi edibeneyo inokubuyiselwa ebantwaneni xa bekhubeka kwaye bewa ngelixa bedlala ngasemva.
Sebenzisa i-turf eyenziweyo ejikeleze indawo yeephuli kungenza indawo ibe mnandi ngakumbi. Ingca inganceda ukudala indawo engatyibilikiyo kunekhonkrithi kwaye ayitshisi elangeni.
Uyilo lwasemva kwendlu lubonisa igalufa ebeka luhlaza ecaleni kwephuli yokubhukuda.
Ukubeka i-turf yokufakelwa ngokuthe ngqo ngaphezulu kwedesika kunokwenza indawo ethe tye ngakumbi yeenyawo ezingenanto. Ukufakwa ngaphantsi kufuneka kusoloko kusetyenziselwa ukunceda ukukhusela umphezulu.
Ingca eyenziweyo isebenza kakuhle kwi-balcony kuba isezantsi yolondolozo kwaye inokuthatha kakhulu ukunxiba.
Nazi iindlela ezikhawulezayo zokubeka ingca eyenziweyo kwibhalkoni.
Ixabiso eliqhelekileyo lesipha somtshato
Okokuqala, ukuyifaka kwibhalkoni yekhonkrithi kuya kufuneka uyicoce kakuhle indawo yesicelo. Ukucoca kuya kukuvumela ukuba uchonge ukuba amanzi aphuma njani kakuhle kwisithuba. Oku kuya kukunceda ubone ukuba kwenzeka phi na ukubhabha okwengeza umsele.
Okwesibini, ukuba le ndawo ichaphazeleka yimvula okanye ufuna ukuyitshiza ukuze uyicoce, uya kufuna ukufaka imingxunya yokuyikhupha kwaye uyigcwalise nge-3/8 ″ shingle. Ngale ndlela nawaphi na amanzi agqithisileyo aya kuphuma endaweni yokuntywila ngaphezulu. Zama ukukuphepha ukusebenzisa amagwebu amagwebu anokuphinda asebenze njengoko anokufumana amanzi kwaye andise kunye nokuthintela indawo ukuba yome. Kucetyiswa u-3/8 ukubekwa ngaphantsi kwamanzi ngokufunxa amanzi asezantsi.
Okwesithathu, uya kufuna ukusika kubungakanani kwaye ubeke phantsi amagwebu engca elenzelweyo. Oku kuyakusebenza njengephedi yokothuka eya kuthi ibonelele ngendawo entofontofo, endaweni yokunyathela ikhonkrithi eqinileyo. Uncedo olongezelelekileyo lokusebenzisa into engaphantsi kuyanceda ukukhusela iirges kunye nokudakumba kwingca yakho eyenziweyo ekubeni ingakheki ibonakale imbi.
Phambili, uya kufuna ukusika ingca yakho eyenziweyo ukuze ilingane indawo ye-balcony. Thatha ulumkiso olongezelelekileyo ngelixa usika njengoko ufumana ithuba elinye lokulifumana. Khusela onke amalungu (ukuba akhona) ngokudibeneyo usebenzisa itheyiphu yengca eyenziweyo ukuthintela ukwahlukana.
Okwesihlanu, khusela umjikelezo webhalkhoni yengca eyenziweyo ngokudibanisa iglu kwigwebu nakumphezulu wekhonkrithi.
Ukubeka ingca yomgunyathi phakathi kwamanyathelo amakhulu ekhonkrithi kunokunceda ekunciphiseni ukhula kwaye kubonelele ngendawo yokuphumla ukuqokelelana ngasemngxunyeni womlilo.
Lo ngomnye umzekelo womngxunya womlilo ongasemva kwendlu ohleli ikonkile kunye nengca eyenziweyo ejikeleze iphuli kwaye ikhitshi elingaphandle .
Le patio enkulu yasemva kwendlu iphantse yagqunywa ngengca ngombhoxo owakha indawo yokuhlala yangaphandle.
Emva kwendlu ebiyelweyo kwipatio enengca nefenitshala yangaphandle.
Indawo enkulu yokuhlala ngaphandle enefenitshala eyenziwe ngomthi.
Umgangatho ophahleni kunye nendawo yokuphumla yangaphandle.
Indawo yokulala ephahleni enengca entle kunye nezitulo zokuhlala.
Uya kufumanisa ukuba uninzi lweendawo zokugcina iimpahla kunye neevenkile zehardware zithengisa ingca eyenziweyo kwaye baninzi abathengisi abakwi-Intanethi nabo. Iindawo ezikwi-Intanethi ezinje ngeAmazon, iWalmart, iDepho yasekhaya, iLowes kunye neCostco zinokhetho lweemveliso onokukhetha kuzo.
Ingca eyenziweyo ibe yinxalenye ebalulekileyo yama-21stInkulungwane yokuphila ngoko nje ukuba uqale uphando lwakho uya kufumana indawo ezininzi zokuthenga.
Injongo yeBhola yeBhola ekhatywayo Iipase zePolymer, 16… $ 25.47$ 28.20 umthengisi ogqibelele (14) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zokhetho eziPhambili ezingama-30,000 zeBTU yoMlilo weRhasi… $ 249,99 umthengisi ogqibelele (604) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ikhalsiyam yeCarbonate Powder 'iGreenway Bi ... $ 24.99 umthengisi ogqibelele (689) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ishushu eshushu iTiger River iSumatran Freshwa… $ 33.59 umthengisi ogqibelele (3) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
UJason statham kunye no-rosie huntington-whiteley batshatile
gubungela iitatoo kumnwe womtshato
izitulo zokugungqisa isitulo
yintoni onokuyifumana kwishawa yomtshato